अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया अनुकूलन & परामर्श - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण मा 20 वर्ष भन्दा अधिक अनुभव Hielscher औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरु को लागि अग्रणी विशेषज्ञ बनािन्छ। हामी आफ्ना ग्राहकहरूलाई पहिलो प्रक्रिया विचारहरूबाट प्रक्रिया अनुकूलन मार्फत अन्तिम स्तर सम्म व्यावसायिक उत्पादनको लागि मार्गदर्शन गर्दछौं – व्यक्तिगत अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरु को लागि सही समाधान को विकास। हाम्रो व्यापक उत्पादन शक्तिशाली र विश्वसनीय औद्योगिक अल्ट्रासोनिक उपकरण र हाम्रो अनुकूलित डिजाइनले सही अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया समाधानको लागि अनुमति दिन्छ। हामी तपाईंको गहन उच्च औद्योगिक अल्ट्रासोनिकेशनको लागि साथी हुनुहुन्छ!
हाम्रो राम्रो प्रशिक्षित कर्मचारीसँग अल्ट्रासोनिक प्रसोधनमा धेरै वर्षको अनुभव छ। हामी हल्का रूपमा हाम्रो ग्राहकलाई पहिलो भोल्युम स्ट्रिजको औद्योगिक प्रसोधनको अन्तिम स्थापनामा पहिलो विचार र परीक्षणबाट समर्थन गर्दछौं। निकट र गोपनीय सहयोगमा, हेलसेस्टरले ग्राहकहरूलाई फ्यास्च्याइटी परीक्षणबाट प्रक्रिया अप्टिमाइजेसनको अन्तिम फाइनल अप र अन्तिम अल्ट्रासोनिक प्रणालीको एकीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ।
उच्च पावर अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाको परिष्कृत विकासले तीन प्रमुख चरणहरू समावेश गर्दछ:
1. सम्भावना: के यो काम गर्दैछ?
यदि ग्राहकले हामीलाई उनीहरूको प्रक्रिया विचारको साथ पुग्छ भने, पहिलो कदम अन्वेषण गर्नु हो भने अल्ट्रासाउन्डले इच्छित प्रभाव प्रदान गर्दछ। यसैले, पहिले व्यवहार्यता परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ – सामान्यतया ब्याच मोडमा – सानो प्रयोगशाला / बेंच-उच्च स्केलमा। यस्तो व्यवहार्यता परीक्षण गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। विशिष्ट सामग्री सानो मात्रामा अल्ट्रासाउन्ड तीव्रता र सेटिङमा ह्वाइट गरिएको छ। परिणामहरू राम्रो संकेत दिन्छन् भने लक्ष्य लक्ष्य sonication द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ग्राहकहरूमा परिष्कृत व्यवहार्यता परीक्षण गर्न सकिन्छ’ साइड वा हेलसेस्टरको अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण सुविधा। तपाईंको प्रकृया विचारहरूको साथ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
अनुकूलन: सबै भन्दा कुशल प्रक्रिया सेटअप के हो?
सफलतापूर्वक व्यवहार्यता परीक्षण पछि, यो दिलचस्प हुन्छ कि अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया औद्योगिक प्रविधि मा खर्च हुनेछ। हेलस्चरको उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्सले प्रक्रियाको अनुकूलन र औद्योगिक उत्पादन चरणमा अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाको पूर्ण रैखिक स्केलाइजेसनको लागि अनुमति दिन्छ। हाम्रो सबै बेंच-शीर्ष यन्त्रहरू औद्योगिक ग्रेडमा बनाइएका छन्: इनलाइन sonication भारी शुल्कमा & 24/7 सञ्चालन, धेरै विश्वसनीय र बलियो। बेंच-शीर्ष स्तरमा, सबै महत्त्वपूर्ण प्रकृया मापदण्डहरू लक्ष्यमा असर गर्न सकिन्छ ताकि सबैभन्दा लाभदायक, कुशल र प्रभावकारी प्रक्रिया सेटअप फेला परेन।
इष्टतम अल्ट्रासाउंड तीव्रता (आयाम, प्रवाह दर)
इष्टतम प्रक्रियाको तापमान
आदर्श सेटअप (एकल पास वा पुन: प्राप्ति)
एक विस्तृत अनुकूलन अनुकूलन गर्न सकिन्छ’ साइड वा हेलसेस्टरको अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण सुविधा। तपाईंको प्रक्रिया लक्ष्यको सन्दर्भमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
प्रक्रिया अनुकूलनका लागि अल्ट्रासोनिक बेंच-अप सेटअप।
3. स्केल-अप: कसरी पूर्ण-व्यावसायिक उत्पादन मापन प्रक्रिया गर्ने?
जब अल्ट्रासोनिक प्रक्रियालाई अनुकूलित गरिएको छ, आदर्श प्रक्रिया प्यारामिटरहरू रैखिक रूपमा उत्पादन साइज माथि मापन गर्न सकिन्छ। प्रक्रिया क्षमता अनुकूलित समयमा प्राप्त परिणामहरूको आधारमा ठीक गणना गर्न सकिन्छ। हेलसिचको कर्मचारीले तपाईंलाई अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूलाई तपाईंको उत्पादन रेखामा एकीकृत गर्न मद्दत गर्दछ – या तो एक नयाँ उत्पादन सुविधा को लागि अल्ट्रासोनिक उपकरण को डिजाइन गरेर या पहिले देखि नै मौजूदा संयंत्र मा अल्ट्रासोनिक्स को दोहन गरेर।
हाम्रो व्यापक उत्पाद दायरा र हाम्रो कुशल ईन्जिनियरिङहरूले सबैभन्दा उपयुक्त एप्याप्सन र इष्टतम नतिजाहरूको लागि अनुमति दिन्छ। स्थापना, सेवा र प्रशिक्षण निश्चित रूपमा हाम्रो विश्वभर उपलब्ध सेवा प्रसादको भाग हो।
अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया परामर्श: व्यवसायिक उत्पादनमा व्यवहार्यता र अप्टिमाइजेसनबाट हेलसेस्टर गाइड!
हेलसिचको औद्योगिक अल्ट्रासोनिक्स विभिन्न आकारहरूमा उपलब्ध छन् – व्यक्तिगत प्रक्रिया लक्ष्यका लागि उपयुक्त। अल्ट्रासोनिक सामानको एक विस्तृत श्रृंखला (विभिन्न प्रोब साइज र आकारहरू जस्तै अत्यधिक उच्च आयाम, उच्च दबाव, उच्च तापमान; बूस्टर सीsहरू; प्रवाह कोषहरू, आदि।) औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रशोधनको लागि वर्गीकरण पूरा गर्दछ। तीव्र प्रक्रियाहरू सजिलैसँग गर्न सकिन्छ र विशेष प्रक्रिया सर्तहरूमा अनुकूलित व्यक्तिगत अल्ट्रासोनिक सेटअपहरूको साथ भरपर्दो भरिन्छ।
भारी शुल्क अल्ट्रासाउंड सिस्टम को 2x60kW को भारी शुल्क आवेदन को लागि
हेलस्चरको उच्च पावर अल्ट्रासोनिक उपकरण:
मानक सोनोट्रोड (180 भन्दा माथिको अनुरोधमा उच्च) संग 180μm सम्म उच्च उत्प्रेरक
धेरै उच्च र निम्न प्रक्रिया तापमान: तरल नाइट्रोजन देखि तरल एल्युमिनियम
उच्च चिपचिपा तरल र चराहरू – साथै ठूलो टुक्राहरू समावेश छन्
ATEX / एफएम प्रमाणित अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर अफ-शेल्फ उपलब्ध
धेरै अल्ट्रासोनिक प्रविधि र प्रकृया पेटेंट
तपाईंको प्रक्रियाको बारेमा हामीलाई कुरा गर्नुहोस्! हामी तपाईंलाई पहिलो पहिलो विचारहरु लाई व्यावसायिक प्रक्रिया को आधिकारिक गर्न सहयोग गर्न प्रसन्न हुनेछौं!
सेवा, रखरखाव र प्रशिक्षण
यहाँ सम्म कि यदि हाम्रो अल्ट्रासोनिक्स को लागी आसान हो र केवल धेरै कम रखरखाव को आवश्यकता को लागी आसान हो, हेल्सेचर को तपाईंलाई खुशी छ कि तपाईंलाई अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण को विषय को आसपास अतिरिक्त सेवाहरु संग सहायता गर्दछ!
48 केडीई अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर
उच्च मात्रा स्ट्रीमहरूको लागि